Imigaqo yokujongana noyilo oluyimfuneko kwiprojekthi yakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yonke imihla, esona sixhobo sisetyenziswa namhlanje sisiselfowuni. Konke oku kungenxa yeentlobo ezininzi zezicelo ezihambelana nobomi bethu ngoku kwaye kulula ukufikelela kuzo. Ngaphambi, ngekhompyuter ngandlela thile ububotshwe, ngoku akufani oko.
Oku kuthetha ukuba indima yeeselfowuni iyakhula. Kungenxa yoko le nto yonke imiba kufuneka ithathelwe ingqalelo kwiselfowuni. Uyilo, ukufikeleleka, ulwakhiwo, ukwahluka ... Yonke into yolungelelwaniso olungcono kuthi. Kule nqaku ndiza kuzama ukunika izikhokelo zokwenza isicelo esahlukileyo.
Lilonke, malunga nezikhokelo ezisixhenxe esithemba ukuba ziluncedo ekuphuhliseni kwaye unokufezekisa injongo yakho.
2 Ubume besicelo
4 Izimbo zomzimba
Lelinye lawona manqaku abalulekileyo ukuphuhlisa usetyenziso. Ukusukela namhlanje ukwenza into engekhoyo kunzima kakhulu. Ukuba uza kuyilungelelanisa, ubuncinci yenze ibonakale yahlukile. Umzekelo, kukho usetyenziso lwazo zonke iintlobo zoluhlu lwezinto eziza kwenziwa, kodwa yintoni eyenza yahluke ku 'Cacileyo' umzekelo? Inyaniso yokuba akukho maqhosha, luluhlu kuphela kunye nokuthambo kokumisela ukuyenza yahluke kwaye kulapho kufuneka ujonge khona.
Ujongano lomsebenzisi kufuneka lisebenzisane ngakumbi. Kuya kufuneka bafumane yonke into abayifunayo ngendlela elula nefanelekileyo. Qiniseka ukuba ayisiyiyo yonke 'esasazekileyo' kwaye yahlulwe yahlelwa ngokwamaqela afanayo ukufumana into oyifunayo ngokukhawuleza.
Kuxhomekeka ekubeni kutheni ufuna ukusebenzisa isicelo, ezinye ziya kuba luncedo esitalatweni, ngelixa usebenza kwaye ezinye ngelixa ukhululekile ekhaya. Umxholo womdali kufuneka ucace kwindalo kwasekuqaleni.
Ngenxa yoku kufuneka iqondwe ukuba umsebenzisi akakwazi ukoyiswa linani elikhulu lamacandelo kunye neempawu. Ke kuya kufuneka unciphise kwaye ususe ezona mpawu zichaphazelekayo.
Eli lelinye lawona macandelo abalulekileyo kubasebenzisi. Izixhobo zefowuni ziyilelwe ukwenza izijekulo, ukuze uzame ukufumana okuninzi kwezicelo kwaye ube ngumthombo wenkuthazo kwabanye. Masithi ukuba sihleli ngesandla esinye, njengokuhlala ebhasini kunye nokuzama ukusebenza kwiselfowuni kunye nomnye, ukuba isenzo 'sokuncinca' ukwandisa okanye ukunciphisa besingakhange siphumelele, bekuya kuba nzima kakhulu ukusebenza ukusukela ukuba akunjalo, siya kufuna izandla ezimbini.
Inqaku elibalulekileyo kukungqinelana ngaphakathi kwesicelo. Kuba, umzekelo, ukuba sibeka isitayile sokufaka kwiphepha eliluhlaza kunye nemiphetho ejikeleziweyo nakwenye eluhlaza kunye nesikwere, oko kudala ukudideka phakathi kwabasebenzisi kwaye kunike imvakalelo yokuphazamiseka. Ukungqinelana kuthetha uku-odola kwaye uyayidinga kwisicelo sakho ngaphandle kwamathandabuzo. Kwaye kuya kufuneka uyenze ngazo zonke izinto zesicelo.
Xa umsebenzisi esenza ukhetho ngeapp, usetyenziso kufuneka luphendule. Oku kudala unxibelelwano, 'ingxelo'. Ngamanye amaxesha 'ukulayisha' okulula ngokwaneleyo. I-Psychology ingathi abantu bafuna ukwamkelwa kwinto esiyenzileyo kwaye yiyo loo nto kufuneka njalo. Ingakumbi kummandla wentengiselwano yemali, ehlala iphazamisa.
Kwaye okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, unyamezelo. Qiniseka ukuba isicelo sakho sivumela abasebenzisi ukuba balungise iintshukumo ezenziweyo kwaye kukho izaziso ezibonisa loo nto. Oku kuthetha ukuba abasebenzisi banokunika ukhetho kwaye benze iimpazamo. Kodwa ubanika ithuba lokuba bazikhulule kwaye barhoxise utshintsho lwabo.
Ngale ndlela ufumana ukhangelo olusebenziseka lula kwaye aluphazamisi amava abo kwimeko yesicelo.
Ukulandela ezi zikhokelo, kunjalo zininzi. Olunye uhlobo oluqhelekileyo olunokuthi ludluliselwe kuzo zonke iinkqubo zentengiso kunye nezinye ngakumbi malunga nokusetyenziswa kweshishini. Kwakhona, kunjalo, inkampani nganye ineendlela zayo. Kodwa ukuba sisiqalo sakho, ezi zinokuba luncedo kuwe.
Abaqulunqi kunye neenkqubo kufuneka bayazi le migaqo-siseko xa besakha isicelo. Ukuba basebenzela inkampani, baya kuba noxanduva loku. Ngoku lithuba lakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Imigaqo ujongano yoyilo lweselfowuni
Ukubambisana kuqalisa izilingo zasimahla zeenkqubo zayo zeefoto kunye noyilo kwiWindows